News Collection: नो मोर पढाइ !
नो मोर पढाइ !
अध्ययन-अध्यापनको नियमित जीवनशैलीबाट विद्यार्थीहरू अत्यन्तै आजित देखिन्छन्। फेसबुकमा अध्ययन र परीक्षाका विषयमा क्रिएट गरिएका विभिन्न ग्रुपले यसलाई पुष्टि गर्छन्। वास्तविकता सबैलाई थाहा छ, पढ्नुपर्छ नै, नपढी जीवन बन्दैन, तर यही पढाइ र परीक्षाको धङधङीले कहिले पढ्ने काम सकिएलाझैं गर्छन विद्यार्थीहरू। 'आज त यस्तै भयो, भोलिदेखि त साँच्चै पढ्छु,' अर्को ग्रुप छ- 'होइन, यो परीक्षा भनेको द्रौपदीको साडीजस्तै हो कि के हो, कहिल्यै सकिँदैन त ?'
अध्ययनलाई नियमित अघि बढाइरहेका युवा विद्यार्थीहरूको ठूलो जमात यस्ता ग्रुपअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा अन्तरक्रिया गर्न व्यस्त छन्। परिपक्व बन्न तथा योग्यता सावित गर्न पनि अध्ययन
गर्नैपर्ने कुरा बुझेकाहरू पनि अध्ययनको समयमा आउने 'भडास' पोख्न फेसबुकलाई नै माध्यम बनाउँछन्।
नजास साजन लेख्छन्-
हात्ती पढेर ठूलो भा'को हो र ?
कमिला नपढेर सानो भा'को हो र ?
जिराफ कम्प्लान खाएर अग्लो भा'को हो र ?
खरायो फेयर एन्ड लभ्ली लाएर गोरो भा'को हो र ?'
'आज त यस्तै भयो, भोलिदेखि त स्योर पढ्छु' लोकपि्रय यो ग्रुप लेख्छ- 'भोलि पढ्छु भन्दाभन्दै परीक्षा नै आइसक्यो, तर भोलि आएन।'
'यो सेमेस्टर त त्यस्तै भो, अर्को सेमेस्टरचाहिँ दामी गर्छु,' ग्रुपले एउटा जोक्स पोष्ट गरेको छ।
बाउ ः नालायक, छिमेकीको छोरीलाई हेर, ऊ सधैं क्लासमा फस्र्ट हुन्छे।
छोरा ः अझै कति हेर्नु, उसलाई मात्र हेरेर त फेल भा'को हो।
परीक्षाको समयमा विद्यार्थीलाई कति तनाव हुन्छ भन्ने कुरा अभिनन्दन जोशीको स्टाटसले बताउँछ, उनी लेख्छन्- 'कोइसन लिक भयो भने अपलोड गरेर पोस्ट गर ल ?'
'हर्लिक्स खाएर पनि एक्जामको भूत गएन,' यो ग्रुपमा दिव्या थापाले पोष्ट गरिन्- 'हर्लिक्स खाएर एक्जामको भूत भाग्ने हो भने त म पढ्न छोडेर हर्लिक्स नै खाएर बस्थें..'
परीक्षाको भूतले सताएपछि प्रीति बस्नेत लेख्छिन्- 'एक्जामका लागि के-के पढ्नुपर्छ सुरुमै भन्नु नि, हामी विद्यार्थीहरूलाई कति सजिलो हुन्थ्यो ?'
'साला !! आज पनि पढ्छु पढ्छु भन्दा-भन्दै दिन बित्यो। भोलिचाहिँ पक्कै पढ्नेछु,' ग्रुपले एउटा जोक्स राखेको छ,
प्रोफेसर ः तिमी क्लासमा किन ढिलो आएको ?
छात्रा ः सर मेरो पछाडि एउटा केटा लाग्यो, त्यसैले
प्रोफेसर ः त्यसो भए झन् किन ढिलो त ?
छात्रा ः सर त्यो केटाले बिस्तारै पछ्याइरहेको थियो, त्यसैले...
'ओइ पढिस् ?'
'के पढ्नु यार π' 'भोलि इंग्लिस त हो,' अंग्रेजी फन्टको यो ग्रुपमा प्रनिश राजभण्डारी लेख्छन्- 'नपढीकन गा'को त इंग्लिसको एक्जाममा तारा देखंे...।' यस्तै एकजना प्रयोगकर्ता लेख्छन्- 'एक्जाम डिस्कोभर गर्ने मानिसको आत्माले कहिल्यै पनि शान्ति नपाओस्।'
यस्तै सुनिल अधिकारी पोस्ट गर्छन्- 'हैन केटाहरू, किन हो किन, म त एक्जाम आयो भने बिन्दास हुन्छु यार, किन हो डर नै लाग्दैन, झन् एक्साइटेड पो हुन्छु त ? किन भन्दिम ? किनभने मलाई पहिले नै थाहा छ, म फेल हुन्छु।'
मैले पढेर त्यो पास भयो म फेल भए यार !!!! ग्रुपले वाल पोस्ट राख्छ- 'क्लासमा सरको मोबाइल बज्दा केही नहुने...मेरो मोबाइल बज्दाचाहिँ बबाल मच्चाउने !!!!'
परीक्षाको समयमा दैनिक जीवन
बिहान ९ बजे ः उठ्ने
१० बजे ः ब्रेकफास्ट
११ बजे ः ८० प्रतिशत कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्ने
१२ बजे ः टेलिभिजन हेर्ने
१ बजे ः लन्च लिने
२ बजे एकछिन सुत्छु अनि पढ्या कुरा सम्भिmन्छु
४ बजे ः गेम खेल्ने
५ बजे ः ६० प्रतिशत कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्ने
६ बजे ः पढाइमा समस्या, साथीसँग सोध्ने- 'कुन-कुन च्याप्टर पढिस् ?'
८ बजे ः पुस्तक खोज्ने
९ बजे ः डिनर लिने
१० बजे ः ला बत्ती गैहाल्यो नि π
११ बजे ः प्लिज भगवान् लुज गार्ड परोस्।